बाँस्कोटाकै अगाडि एमाले बनेपा नगर कमिटी अध्यक्ष रन्जितकारले किन गरे जातिय र भेगिय राजनीतिको कुरा ? – मिलिजुली खबर
बाँस्कोटाकै अगाडि एमाले बनेपा नगर कमिटी अध्यक्ष रन्जितकारले किन गरे जातिय र भेगिय राजनीतिको कुरा ?
एमाले बनेपा नगर कमिटीका अध्यक्ष रत्न कुश रन्जितकारले पूर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई साक्षी राखेर जातिय र भेगिय राजनीति नगर्ने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार एमाले काभ्रे जिल्ला ईन्चार्ज समेत रहनुभएका पूर्व मन्त्री बाँस्कोटा प्रमुख अथिति र जिल्ला पार्टी अध्यक्ष अशोक कुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ विशेष अतिथि भएको नगर पार्टी कार्यालय उदघाटन कार्यक्रममा बोल्दै नगर कमिटी अध्यक्ष रञ्जितकारले स्पष्ट रूपमा आफुले जातिय र भेगिय राजनीति नगर्ने बताउनुभएको हो ।
‘एमाले बनेपा नगरले भेगिय राजनीति गर्दैनन् । जातिय राजनीति गर्दैन् । सामावेशीताको आधारमा वर्गीय राजनीति गर्छ । नगर कमिटी अध्यक्ष रञ्जितकारले भन्नुभयो ।’
पछिल्लो समय पूर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा जातियता र क्षेत्रीयताको सवालमा निकै साँघुरो सोचाई राख्ने नेताको रूपमा एमालेभित्रै चिनिँदै गर्दा नगर कमिटी अध्यक्षले कडा शब्दमा बनेपामा अब जातियता र क्षेत्रीयताको राजनीति नचल्ने बताउनुभएको हो । नगर कमिटी अध्यक्ष रञ्जितकारलाई आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा बनेपा नगरपालिकामा एमालेको तर्फबाट मेयरको उम्मेदवारका रूपमा समेत चर्चा गरिन थालिएको छ ।
पूर्व मन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई संघीयता र समावेशीको सवलमा होस् या त चुनावमा टिकट वितरण गर्दा नै किन नहोस् निकै जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीको रूपमा चिन्ने धेरै छन् । बाँस्कोटा समावेशीता र संघीयता अन्तर्गत प्रदेश भन्ने शब्द हत्तपत्त उचारण नै गर्न चाहाँदैनन् । अन्य जिल्लाबाट काभ्रे आएर एमाले बाहेकका दलमा आबद्ध हुने, फरक विचार राख्ने र सहयोग गर्ने प्रति बाँस्कोटाले निकै तल्लो तहसम्म झरेर अभिव्यक्ति दिने गर्नुहुन्छ ।
बाँस्कोटाको सामुन्ने बनेपा एमाले नगर कमिटी अध्यक्ष रञ्जितकारले भन्नुभयो ‘चाहे त्यो वडा नम्बर १४ को आशापुरीको तामाङ बस्तीमा होस् । चाहे त्यो वडा नम्बर ८ को नेवार बस्तीमा होस् । चाहे त्यो वडा नम्बर १ को जैसी, बाहुन बस्तीमा होस् । चाहे त्यो ६ नम्बर वडाको कुइंकेल गाउँमा होस् । बनेपा नगरपालिकाभित्रका एमालेको लागि नगर कमिटीले संरक्षकत्वको भूमिका निभाउँछ ।’
बनेपामा नेवारभित्र पनि बादे थरका ब्यक्तिलाई उम्मेदवार उठाउँदा मात्रै जितिन्छ भन्ने सोचबाट अन्य दल जस्तै एमाले पनि ग्रसित छ । एकथरी एमालेले फेरी पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा हालका मेयर लक्ष्मी नरसिंह बादेलाई थरकै आधारमा उम्मेदवार दिईनु पर्ने लबिङ गर्ने निश्चित छ । त्यसै तर्फ लक्षित गर्दै नगर कमिटी अध्यक्ष रञ्जितकारले जातिय र भेगिय राजनीतिको सवाल उठाएको हुन सक्ने धेरैले अनुमान गरेका छन् ।
दोलखा काँग्रेस सभापति लामा काठमाडौँको जुवाखालबाट पक्राउ
काभ्रेमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस निर्माण तीव्रतासँगै उपकरण जडान